एक दिवसीय र टी ट्वान्टी सिरिजको बन्द प्रशिक्षण शुरु::kamananews
एक दिवसीय र टी ट्वान्टी सिरिजको बन्द प्रशिक्षण शुरु
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँगको एक दिवसीय र टी ट्वान्टी सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले बन्द प्रशिक्षण सुरू गरेको छ । कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आजदेखि बन्द प्रशिक्षण सुरू भएको हो ।
सो बन्द प्रशिक्षणमा २० खेलाडी छन् । बन्द प्रशिक्षणमा कप्तान पारस खड्कासहित वसन्त रेग्मी, भीम सार्की, अविनाश बोहरा, विक्रम सोब, विनोद भण्डारी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल र करण केसी छन् ।
आज पहिलो दिनको बन्द प्रशिक्षणमा भने १६ खेलाडीले मात्र सहभागिता जनाएको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षक जगत टमाटाले राससलाई जानकारी दिए । उनले केही खेलाडी बाहिर जिल्लामा र केही विदेश भएकाले सबै खेलाडीको उपस्थिति हुन नसकेका बताए ।
कप्तान पारस खड्का र दीपेन्द्र सिंह ऐरी भने अष्ट्रेलियामा छन् । केही दिनपछि सबै खेलाडी बन्द प्रशिक्षण सहभागी हुने प्रशिक्षक टमाटाको भनाइ छ । युइर्एमा नै हुने उक्त प्रतियोगिता आगामी माघ ११ देखि २० गतेसम्म हुनेछ ।
युएइसँगको पहिलो एक दिवसीय खेल आगामी माघ ११ गते हुनेछ । दोस्रो खेल माघ १२ र तेस्रो खेल माघ १४ गतेका लागि तय भएको छ । यस्तै टी ट्वान्टीतर्फ पहिलो खेल माघ १७, दोस्रो माघ १८ र तेस्रो खेल माघ २० गते हुनेछ । नेपालले गत वर्ष जिम्बाबेमा भएको विश्वकप छनोटबाट एक दिवसीय मान्यता पाएको थियो ।
खेलकूद बाट अन्य
महिला टी-२० स्मास क्रिकेटः नेपालको लगातार दोस्रो जित
२९ पुस, काठमाडौं । महिला टी-२० स्मास क्रिकेटमा नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ । आइतबार भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले मलेसियालाई ६ विकेटले हराएको हो । मलेसियाले दिएको ६२ रनको लक्ष्य नेपालले १६.२...
२७ पुस, काठमाडौं । पोर्चुगलका कप्तान तथा युभेन्टसका स्ट्राइकर क्रिष्टियानो रोनाल्डोमाथि लस भेगास प्रहरीले डीएनए नमूनाका लागि वारेन्ट जारी गरेको छ । एक अमेरिकी महिलाले लगाएको बलात्कार आरोपबारे छानबिन गरिरहेको प्रहरीले थप अनुसन्धानको लागि रोनाल्डोको...
कोपा डेल रे : आज हुँदैछन् यी ‘रोमाञ्चक’ चार खेल, को–को भिड्दैछन् त ?
काठमाडौँ – स्पेनिस फुटबल प्रतियोगिता कोपा डेल रेमा आज चार खेल हुँदैछन् । यस प्रतियोगिताअन्तर्तग अन्तिम १६ को पहिलो लेगका ४ खेल आज हुन लागेका हुन् । आज चार खेलभएपछि अर्कोदिन अन्य तीन खेल हुनेछ र...
क्रिकेटको कथामा फिल्म बनाउने पारस खड्काको घोषणा,
’एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसेस’ले अब चलचित्र निर्माण गर्ने भएको छ । एक्सपर्टले क्रिकेट सम्बन्धी चलचित्र निर्माण गर्न लागेको संस्थाका सद्धभावना दुत रहेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले बताए । सिड्नीमा आयोजित कार्यक्रममा...
‘क्रिकेट क्लिनिक’मा बालबालिकासँग यसरी रमाए पारस खड्का
सिड्नी । नयाँ वर्षको आगमनसँगै अस्ट्रेलियामा नेपाली क्रिकेट प्रत्येक परिवारको कुराकानीको विषय भएको छ । खासगरी अस्ट्रेलियाका नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरुसँग बलियो नाता गाँस्न यहाँ आइपुगेका नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्का सहितको टोलीले...
भारतीय फुटबलमा ‘गोल मेसिन’ का नामले परिचित सुनिल क्षेत्रीको दुई गोलको सहयोगमा भारतले थाइल्याण्डलाई ४–१ ले हराउँदै एसिया कपमा विजयी सुरुवात गरेको छ ।भारतले सन् १९६४ पछि पहिलो पटक एसिया कप फुटबलमा जित हात...
२३ पुस, काठमाडौं । लिग लिडर बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा जित हात पारेको छ । सोमबार बिहान भएको खेलमा बार्सिलोनाले गेटाफेलाई उसैको मैदानमा २–१ गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । बार्सिलोनाको जितमा कप्तान लियोनल मेस्सी...
बंगालदेशमा पनि चम्किए सन्दीप, डेब्यु खेलमै दुई विकेट लिए
काठमाडौं । नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल) क्रिकेटमा पनि चम्किएका छन् ।आइतबार सिलेट सिक्सर्सबाट बीपीएल खेलेका सन्दीपले आफ्नो डेब्यु खेलमै दुई विकेट लिन सफल भएका छन् । बिग ब्यास लिग...
क्रिकेटरले दुई वर्षको तलब पाउने,कस्ले कति पाउने ?
काठमाडौं : नेपाली क्रिकेट खेलाडीले पछिल्लो दुई वर्षदेखि रोकिएको मासिक तलब पाउने भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बनमा परेपछि घरेलु क्रिकेटको सबै जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले खेलाडीको रोकिएको तलब...
एक इनिङले चम्किएका अलराउण्डर !
… त्यो दिन क्यानडाविरुद्धको खेल जितेपछि राति सोमपाल कामी र म होटलको कोठामा सुतिरहेका थियौँ । सोमपाल मेरो रुम पार्टनर । हामी कहिल्यै बेडमा सुत्दैनौँ । भुइँमा नै ओछ्यान लगाएर सुत्छौँ । रातको एक बजिसकेको...